အလောင်းမင်းတရား နှင့် လူမှု-နိုင်ငံရေး ဆက်စပ်အခြေအနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အလောင်းမင်းတရား နှင့် လူမှု-နိုင်ငံရေး ဆက်စပ်အခြေအနေ
အလောင်းမင်းတရား နှင့် လူမှု-နိုင်ငံရေး ဆက်စပ်အခြေအနေ
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Jul 5, 2013 in Creative Writing, Think Different | 35 comments
မြန်မာရာဇဝင်တွင် အခြားအခြားသောမင်းများနှင့် မတူဘဲ ပြင်းထန်သောဇာတ်ကြောင်းဖြင့် ထီး နန်းစိုက်တည်ခဲ့သော ဦးအောင်ဇေယျ။ အခြားသောမင်းများက ထီးနန်းဆက်ခံခြင်းဖြင့် မင်းပြု ခဲ့သော်လည်း ရွာတစ်ရွာ၏သူကြီးအဆင့်မှနေ၍ မြန်မာ့ထီးနန်းပလ္လင်ပေါ် လှမ်းတက်နိုင်ခဲ့သော ဦးအောင်ဇေယျ။ ထိုဦးအောင်ဇေယျ မိမိကိုယ်ကို ရှင်ဘုရင်လုပ်ခဲ့ပုံကိုနားလည်ရန်မှာ တိုက်ပွဲများ တွင် အောင်ပွဲအလီလီရခဲ့သော စစ်မက်ရေးရာထူးချွန်မှုတင်မက ခေတ်အခါ၏ လူမှု-နိုင်ငံရေး ဆက်စပ်အခြေအနေကို ခွင်ချချိန်ညှိတတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘုရင့်ရိုက်ရာကို ရထိုက်သူ၊ တရားဝင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရန် မင်းရိုးပေါက်ပြီးသူဟူသော အသိအမှတ် ပြုခြင်းကို လက်တွေ့ကျကျရယူရန် ဦးအောင်ဇေယျသည် လူမှု-နိုင်ငံရေးကို ခွင်ချချိန်ညှိနိုင်ခဲ့ သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ စကြဝဠာဗေဒတွင် ဘုန်းရှင်ကံရှင်ဟူသောအယူနှင့် ကိုက်ညီရန် ဦးအောင်ဇေယျသည် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရန် ကံကြမ္မာကကြိုတင်ပြဌာန်းပြီးသူအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ပုံသွင်း ထားနိုင်ခဲ့သည်။ လက်တွေ့တွင်လည်း ဦးအောင်ဇေယျ၏ ထကြွမှုကိုကြေငြာခဲ့သော သဘာဝလွန် နိမိတ်လက္ခဏာများက ဦးအောင်ဇေယျကို ရှင်ဘုရင်အဖြစ် အကြွင်းမဲ့အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ (ဥပမာ လက်ရုံးမှမီးတောက်သည်ဟု ကောလဟာလလွှင့်နိုင်ခဲ့ခြင်း)
ဦးအောင်ဇေယျအား မြန်မာ့ထီးနန်းပလ္လင်ပေါ်သို့ တွန်းပို့ခဲ့သည့်အရေးတော်ပုံသည် ၁၇၅၂ခု၊ ဧပြီ လဆန်းတွင် စတင်ခဲ့သည်။ မွန်တို့သည် အင်းဝမြို့တော်ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကာ မြန်မာဘုရင် မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိကို နယ်နှင်ဒဏ်ပေးပြီး နောက်တစ်လအကြာ၌ မုဆိုးဘိုရွာသူကြီး ဦးအောင် ဇေယျကို သစ္စာပေးလာသော် ဦးအောင်ဇေယျသည် သစ္စာမခံ။
ဦးအောင်ဇေယျသည် မွန်တို့နှင့်တစ်နှစ်ခန့်ကြာအောင် စစ်ပြုခဲ့ရရုံတင်မက ဒေသခံမြန်မာခေါင်း ဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးဟာကွက်အပေါ် အခွင့်အရေးယူရန် အရှေ့ဘက်တောင်ကုန်းများဆီမှ ဆင်း လာသူ ကွေ့ရှမ်းများနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ရသည်။ လက်ဦးဆုံး မြန်မာ့ဗဟိုချက်မဒေသမှ မွန်ဘုရင်ကို တိုက်ထုတ်ရန် အောက်ဘက်တစ်လွှားကို တိုက်ပွဲများရွပ်ရွပ်ချွံချွံဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ရှမ်းနှင့်မဏိပူရ ကိုပါ ကြီးစိုးနိုင်ခဲ့ပြီး မွန်တို့ကို တိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့သည်နှင့် အိမ်နီးချင်း ယိုးဒယားကိုပါ သိမ်းလိုခဲ့ခြင်းမှာ သူ့ခေတ်အခါ၏အတွေးအခေါ်ဖြစ်သော နိုင်ငံရေးယှဉ်ပြိုင်ဘက်များဟု သူက မြင်ခဲ့၍ဖြစ်သည်။
တိုက်ပွဲများတွင် အောင်ပွဲအလီလီရလာသည်နှင့်အမျှ သူသည် ဘုန်းမီးနေလသာလွန်သော ဘုရင် တစ်ပါးအဖြစ် ပေါ်ပေါက်ရန်လိုသည်။ သူ၏ထိုးစစ်တွင် စစ်ညာသံပေးခဲ့ကြသော ကျေးလက်ဒေသ မှ တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ အကူအညီဖြင့် အတိတ်၊ နိမိတ်၊ တဘောင်၊ စနည်း စသော အယူတော် မင်္ဂလာကောက်ထုံးများ၊ လောကဓာတ်ဆိုင်ရာ ယုတ္တိရှိခြင်းများသည် နောက်ဆုံးတွင် လက်တွေ့ကျသော အရှိတရားအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့သည်။
ဦးအောင်ဇေယျ တဖြစ်လဲ အလောင်းမင်းတရားသည် မွန်ဆန့်ကျင်ရေးဘုရင် မဟုတ်ခဲ့။ မွန်ဘုရင် သည် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရန် မဆီလျော်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသာလျှင် ဘုန်းရှင်ကံရှင် ဖြစ်သောကြောင့်ဟု ဆိုခဲ့ခြင်းသာ။ ဤသို့ဖြင့် သူသည် ဘုန်းမီးနေလသာလွန်သော ဘုရင်တစ်ပါး အဖြစ် သူ့ဆန္ဒအပေါ် အများသဘောညီမှုက မင်းတရား၏အောင်ပွဲအတွက် အကြောင်းရင်းခံ ဖြစ်ခဲ့သည်။
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ သူကြီးကလန်များ၊ ရှမ်းစော်ဘွားများ မင်းတရားလက်အောက် ခိုဝင်ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းတို့၏ ရာထူးဌာနန္တရကို အလောင်းမင်းတရားက ပြန်လည်အတည်ပြုပေး မည်ဟု စိတ်ချခဲ့ကြသည်။ အလောင်းမင်းတရား၏ စာချွန်လွှာများထဲတွင် ဘုရင်ငယ်များ၏ ခိုဝင်မှုကို သဘာဝကျသောကိစ္စအဖြစ် မျှော်လင့်ထားခဲ့သည်။ စစ်မက်ခင်းရသည်မှာ အခြားသော ဘုရင်ငယ်များက ဘုန်းရှင်ကံရှင် အလောင်းမင်းတရား၏ အုပ်ချုပ်မှုကို ငြင်းဆန်သောကြောင့် သာဖြစ်သည်။ ဤသို့သော မူဝါဒများနှင့် အလောင်းမင်းတရား၏ တရကြမ်းတိုက်ပွဲစဉ် အကျဉ်းချုပ်များမှာ –
၁၇၅၂-၅၃ တွင် သူ၏အခြေစိုက်ဇာတိဖြစ်သော မူး-ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်း၏ အထက်အညာ၊ ဟိန္ဒူ တို့၏ ပိုင်နက်နယ်မြေဖြစ်သော မဏိပူရ ကို ကျူးကျော်နယ်ချဲ့သည်။ ထို့နောက် အရှေ့မြောက်ဘက်မှ ရှမ်းစော်ဘွားများနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ကာ သူ့အနေအထား၏ကျောဘက်ကို ကာကွယ်ထားသည်။
၁၇၅၄ ခုတွင် မွန်တို့သိမ်းယူထားသော မြန်မာတို့၏ သက်တမ်းရင့်မြို့တော် အင်းဝကိုပြန်လည် တိုက်ယူနိုင်ခဲ့သည်။
၁၇၅၅ ခုတွင် ဒဂုံသို့ သွားလမ်းပွင့်နေသော ပြည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။
၁၇၅၆ ခုတွင် မြန်မာပြည်အဓိကဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သော သံလျင်ကိုသိမ်းခဲ့သည်။
၁၇၅၇ ခုတွင် တိုက်ပွဲ၏စိန်အခေါ်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သော မွန်တို့၏မြို့တော် ပဲခူးကို တရကြမ်းဝင်စီး နိုင်ခဲ့သည်။
၁၇၅၈ ခုတွင် မဏိပူရကသည်းများကို နှိမ်နင်းပြီး နောက်တစ်နှစ်အကြာ ၁၇၅၉ တွင် ယိုးဒယား ပြည်ကို ကျူးကျော်ရန်ပြင်ဆင်နေလေပြီ။
၁၇၆ဝ ခု၊ မေလတွင် အလောင်းမင်းတရား နတ်ရွာလားတော်မူသည်။
အလောင်းမင်းတရားသည် စစ်ရေးတစ်ခုသာ ထူးချွန်သောသူရဲကောင်းမဟုတ်။ နိုင်ငံရေး၊ သံတမန် ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ စီးပွားရေး စသည်တို့တွင်လည်း ခေတ်အခါထက် ပိုရှေ့ပြေး သော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သာ သူ၏နန်းစံသက် ၈နှစ်တာ ကာလအတွင်း တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
တိုင်းပြည်ကို ဂရုစိုက်သော၊ သာသနာကိုအားပေးချီးမြှောက်သော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ဘုရင်တစ်ပါး ဟူသည့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အရိုးစွဲနေသော ပြည်သူလူထု၏မျှော်လင့်ချက်များအတွက်လည်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အလောင်းမင်းတရား ပြုတော်မူခဲ့သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုများမှာ ရွှေချက်သိုစေတီတော်၊ မြတောင် မြို့ ပြည်မြို့နှင့် မြန်အောင်မြို့တို့မှ ဖောင်တော်ဦးစေတီတော်များ၊ ဒဂုန်ဆံတော်ရှင်၌ စောင်းတန်း နှင့်ဇရပ်များသာမက အညာ-အကြေမြစ်စဉ်တစ်လျှောက် ဘုရားပုထိုး ဟောင်းနွမ်းပြိုပျက်များကို ကံကျွေးလက်ခငွေတော်ပေး၍ ပြုပြင်စေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ စိတ်ကူးယဉ်ကိုယ်စားပြုမှုတစ်ခုမှာ စကြဝတေးမင်း၊ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော် ကို တောင်းဆုယူထားသော ဘုရားဆုပန်မင်းယောက်ျား စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အလောင်းမင်းတရား သည် အရိုးစွဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ မျှော်လင့်ချက်ကို မဖျက်ဆီး။ သူ၏ အမိန့်တော်ပြန်တမ်းများ ထဲတွင် သူ့ကိုယ်သူ စကြဝတေးမင်းလောင်းအဖြစ်၊ ဘုရားလောင်းအဖြစ် ”အရိန္ဒမာစကြာရွှေလှံရ” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ”အလောင်းမင်းတရားကြီးဘုရား” ဟူ၍လည်းကောင်း ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။
အကယ်၍ သူသာ ဘုရားဆုပန်မင်းယောက်ျား ဧကန်စစ်စစ်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ဤမျှလူသတ်ကြမ်း သော စစ်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်လာပါမည်လော။ ဟံသာဝတီကို ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြံစဉ် မွန်ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကိုပင် ဂရုမစိုက်ဘဲ မွန်ဟူသမျှ အရပ်အဆိုင်းမရှိ လိုက်လံ လုပ်ကြံခဲ့သော၊ မွန်ရဟန်းတော်များကို ဆင်ဖြင့်နင်း၍သတ်ခဲ့သော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော စစ်ဘုရင်သည် ခေတ်အခါ၏ လူမှု-နိုင်ငံရေးဆက်စပ်အခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အကြွားသန်သောဘုရင်အဖြစ် ရယ်ပွဲဖွဲ့စရာမဟုတ်ချေ။
အလောင်းမင်းတရား၏ စွယ်စုံထူးချွန်မှုကို အလျှံပယ်ပြသခဲ့သော ဂျော့ဘုရင်-၂ ထံပေးပို့ခဲ့သော ရာဇသံရွှေပေကိုလည်း ယခုခေတ်တွင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ။
အလောင်းမင်းတရား၏ လူမှု-နိုင်ငံရေး အကိုင်အတွယ်ကျွမ်းကျင်ပုံ နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုမှာ ဗြိတိသျှတို့၏ အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီသည် မင်းတရားထံမှ ပုသိမ်တွင် မြေတစ်ကွက်ရလိုကြောင်း တောင်းခံခဲ့သည်။ မင်းတရားသည် ဗြိတိသျှတုိ့တောင်းခံသမျှ ရက်ရောစွာပေးခဲ့သူ မှန်သော်လည်း ပုသိမ်၌မြေနေရာရွေးချယ်သောအခါ ဗြိတိသျှတို့သည် ခံတပ်တည်ရန် နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ် သော ဘုရားကုန်းတော်ကို တောင်းခံခဲ့သည်။
ဤတွင် မင်းတရားကြီး ပွင့်လင်းစွာမိန့်တော်မူခဲ့ပုံမှာ ”ငါကိုယ်တော်တိုင် ထီးနန်းရိုက်ရာမခိုင်မြဲ သေးဘဲနှင့် အထွဋ်အမြတ်နေရာ ဘုရားကုန်းတော်ကို မောင်မင်းတို့အား ပေးသနားတော်မူလိုက် လျှင် ဘာသာသာသနာကို မခန့်လေးစားလုပ်သူဟု အထင်ခံရပေတော့မည်။ တိုင်းသူပြည်သား များ၏စိတ်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်သော ဘုန်းတော်ကြီးများလည်း ဆန့်ကျင်ကြပေတော့မည်။ ထိုအခါ ထီးနန်းရိုက်ရာကို အပြည့်အဝမရသေးသော ငါကိုယ်တော်သည်လည်း ထီးနန်းကို လက်လွတ် ဆုံးရှုံးရပေတော့မည်။”
အလောင်းမင်းတရားသည် ဟိုင်းကြီးကျွန်းဦးစီးမှူး ဘရွတ်ခ်အား စိတ်ရှည်သီးခံရမည့်အကြောင်း အကြံပြုခဲ့သည်။ ” ယခုလောလောဆယ် သည်မျှနှင့်ကျေနပ်ချေ။ နောက်နောင် ပိုပြီးပေးသနားဖို့ ရာ ငါကိုယ်တော်၏အာဏာသာတည်း။”
စစ်မျက်နှာနှစ်ဘက်စလုံးမှ တပ်သားအားလုံးကြားရသည်အထိ ကြောက်ခမန်းလိလိ တိုက်ပွဲခေါ် သံကိုပေးနိုင်ခဲ့သူ အလောင်းမင်းတရား၊ တိုက်ပွဲစတင်ပြီဆိုသည်နှင့် ဆင်ကိုချွန်းဖွင့်ကာ ရှေ့ဆုံးမှ စစ်ဦးဘီလူးစီးသလို စစ်မျက်နှာခင်းခဲ့သော စစ်ပါရဂူအလောင်းမင်းတရား၊ ထိုသို့သော ဘုရင် စစ်စစ် ဘုရင်တစ်ပါး၏ သံဃာထုအပေါ်ထားသော သဘောထားမှာ ပညာယူဖွယ်ဖြစ်နေသည်။ မင်းတုန်းမင်းကဲ့သို့ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးနှင့်ဆွဲစေ့ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုကိုသာ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆွဲစေ့ခြင်းဖြစ်၏။
ပို့စ်ကို ဆောင်းပါးအဆင့်မီအောင် စာပြောနဲ့ရေးထားပါတယ် သူကြီးရေ။ ပြုံးဆိုလိုချင်တဲ့ တကယ့် ရည်ရွယ်ရင်းကိုတော့ ကွန်မင့်မှာပဲ အလွတ်သဘောရေးပါရစေ။
လူမျိုးရေးနဲ့ လူဦးရေ ဖိအားကြီးတဲ့ နိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားက မလူးသာမလွန့်သာ မြန်မာပြည် ကလေးဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ မျက်စိပိတ်နားပိတ်ခံထားရတာကြောင့် အခုမှ ရေးရေးကလေး မျက်စိပွင့်လာတဲ့အခါ အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ရှိနေမှာ မဆန်းပါဘူး။ ခုလို စပ်ကူး မတ်ကူးကာလမှာ လူထုဟာ သူရဲကောင်းကိုးကွယ်မယ်၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်မယ်၊ ဒါတွေဟာ သိပ်ကို သဘာဝကျနေတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အမြဲဝတ်သံဃာ ငါးသိန်းခန့်ရှိတယ်လို့ သိထားပါတယ်။ သံဃာတွေ တိုက်ရိုက် မဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိပေမယ့် သူတို့ကိုဆွမ်းကွမ်းဝေယျာဝိစ္စတာဝန်ယူထားတဲ့ ဒကာဒကာမ အရေအတွက် တကယ်မသေးဘူး။ ဦးဇင်းဝီရသူကို တိုင်းမ်က မျက်နှဖုံးတင်တော့ ဒီဦးဇင်းကို လစ်ဘရယ်တွေက လွဲလို့ ဘယ်သူမှ ရှုတ်မချတဲ့အပြင် တိုးလို့တောင်ကြည်ညိုကုန်တယ်။ လက်သင့်မခံချင်ပေမယ့် လက်သင့်ခံရမယ့် အမှန်တရားပါ။
ဘာသာရေးသမားလို့ပဲဆိုဆို၊ အစွန်းရောက်လို့ပဲပြောပြော၊ ကွန်ဆာဗေးတစ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ချင် သတ်မှတ်၊ အဲဒီ အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေမှာ ကြောက်စရာ့အင်အားရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူတို့ ရဲ့ ခေါင်းမာမှုနဲ့ သူတို့အချင်းချင်း အင်မတန်စည်းလုံးမှုပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ လစ်ဘရယ် ပါတီလို့ယူဆရမယ့် သြဇာကြီးပါတီနှင့် လစ်ဘရယ်များ သူတို့ကို ထိပ်တိုက်တွေ့လို့ အလုပ် မဖြစ်နိုင်ပါ။ လစ်ဘရယ်များက သံဃာထုအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်ပြီး ပို့စ်ပါအကြောင်းအရာထဲ ကလို အလောင်းမင်းတရားထုံး နှလုံးမူပြီး သံဃာ့သဘောကို အလေးအနက်ထားမှ ရွေးကောက် ပွဲရလဒ်ကောင်းမယ်လို့ ပြုံးယူဆပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ် နိုင်ငံရေးအကွက်မှားရင် ထိုးကျွေးရမှာ ပြုံးတို့ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
လစ်ဘရယ်တစ်ယောက်က ဒီလိုပို့စ်မျိုးရေးတင်လို့ ဖတ်ရတဲ့လူတွေ ဖီလင်ငုတ်ကုန်ပြီဆိုရင် စိတ် မကောင်းပါဘူး။ လစ်ဘရယ်မှန်ရင် လှလှပပအရှုံးပေးတတ်ရပါတယ်။
အလောင်းမင်းတရားရဲ့ လူမှု-နိုင်ငံရေးဆက်စပ်အခြေအနေကိုင်တွယ်ပုံဟာလည်း လိုရာကို ဆွဲရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ထမင်း နပ်မှန်ဖို့က အဓိက
၀င်ငွေ ပုံမှန်ဖို့က ဒုတိယ
ဆိုရှယ် ၀ဲဖဲ က ဆတ္ထမ
ဘဲလင့်စ် မျှဖို့ က အတ္ထမ
လူရှိန်ဖို့ (esteem)က န၀မ
အခန်းတခါးပိတ်လို့ စန္ဒယား နှိပ်ဖို့ က ဒဿမ
ဟင်င်င်င်င် ဒီကိုယ်တော် ဇောက်ထိုး စဉ်းစားတာပါလားးးးးး
မှတ်ချက်အနေနဲ့တော့ သမိုင်းကို လေ့လာမူ့ ကောက်ချက်ချမှု့
ဝီ့ကို ငြိုငြင်တာလား လစ်လစ်ရယ်..
ဝီ့ ရင်ထဲ မကောင်းဘူး ….သော်တကိ ရဲ့လား ..ငိငိ
ဦးအောင်ဇေယျ သမိုင်းကြောင်းလေးကိုတော့ လေ့လာသွားပါပြီ…..
နောက်ထပ် ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမည့် အကြောင်းအရာများကိုတော့…
စောင့်မျှော် ဖတ်ရှု့ဖို့ နေရာယူထားလိုက်ပါပြီ………….
ခမည်းတော် မင်းညိုစံနှင့် မယ်တော်မဟာဒေ၀ီ စောညိမ်းဦးတို့မှ သက္ကရာဇ် ၁၀၇၆-ခုနှစ်တော်သလင်းလပြည့်ကျော်(၁)ရက် သောကြာနေ့ ညဉ့် တစ်ချက်တီးကျော် ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ် မွန်းတည့်မတ်ချိန်တွင် ဖွားမြင်သည်။ ပျိုရွယ်စဉ်က သုံကြိမ်တိုင်တိုင် လက်ရုံးတော်မှ မီးတောက်ခဲ့သည်။ ၁၁၁၃-ခုနှစ် မွန်တို့လက်ချက် ဖြင့် အင်းဝပြည်ကြီး ပျက်စီးသောအခါ ဇာတိ မုဆိုးဘိုရွာမှ နေပြီး မွန်တို့ရန်ကို တွန်းလှန်ကာ မြို့တည်၍ ၁၁၁၄-ခုနှစ်တွင် မင်းပြုသည်။ ဘုန်းကြီးသောမင်းယောက်ျားဖြစ်သည့်အပြင် ကြံရည်ဖန်ရည်လည်း ကောင်းလှသဖြင့် အင်အားအဆမတန်များပြားသော ရန်သူ့စစ်တပ်ကြီးများကိုပင် အံ့သြလောက်အောင် ချေဖျက်သုတ်သင် ပစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရင့်နောင်ကဲ့သို့ပင် အလောင်းမင်းတရားက လည်း …”..စစ်တို့၏ သဘောမှာ အင်အားကြီးသည် ငယ်သည် ပဓာနမဟုတ်၊ သူရသတ္တိနှင့် စစ်ပရိယာယ် ကြွယ်ဝမှုသာ ပဓာနဖြစ်သည်..” ဟူသော သဘောမျိုးကိုပင် မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။
ရန်သူအများအပြားကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပြီးနောက် မုဆိုးဘိုကို “ရွှေဘို”ဟု သမုတ်ကာ ထီးနန်းစိုက် တော်မူသည်။ “…. အမယ်ကြီးနှင့် ဘကြီးတား၍ လားလားမနိုင် သောကြာသားက စကားခိုင်၊ သံတိုင်ကျောက်ခဲ လူပျိုချင်းတွင် ပိုလို့ကဲ။ ပဲ နှင့် ပျောင်းကို ဟောင်းလျှင် ပစ်၍ အသစ်ရှာ အောင်ပါစေ သား သောကြာသား….” ဟူသော တဘောင်ဆန်ဆန် သီချင်းကို ပြည်သူတို့ ထပ်မနား ရွတ်ဆိုနေချိန်မှာပင် အလောင်းမင်းတရားကလည်း အောင်ပွဲများ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရရှိခဲ့သည်။
ရွှေဘိုမြို့တော်ကြီးမှာ အလောင်းမင်းတရား၏ ဘုန်းရိပ် ကံရိပ်အောက်တွင် သာယာစည်ကားပြီး ဘေးရန်အန္တရာယ်လည်း လုံခြံစိတ်ချရသဖြင့် ”..ဒို့မေလေး မကြေဖျက်၊ မြောက်ဘက်ကယ်တဲ့ ဟိုတခို၊ ပြေးစို့ နှစ်ကိုယ်၊ ဆိုင်းစိုစို ရန်လုံးပြိုပါတဲ့၊ ပြည့်ရွှေဘို ထိုမြို့မှာ မိုးခိုစို့လေး..” ဟူသောသီချင်းများ ပေါ်လာသည်။
အလောင်းမင်းတရားသည် ၁၁၁၇-ခုနှစ်တွင် ဒဂုံကို အောင်မြင်ပြီးနောက် ” ရန်အပေါင်းကို ကုန်စင်အောင် လုပ်ကြံတော်မူမည်”ဟု အမိန့်ရှိ၍ “ရန်ကုန်”ဟု သမုတ်တော်မူသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရန်သူ သူပုန်များ ကုန်စင်သလောက်ရှိသွားသောအခါ ထိုခေတ်စစ်ဘုရင်ကြီးများ၏ ထုံးစံအတိုင်း ယိုးဒယားသို့ပါ ချီတက်တိုက်ခိုက်ပြန်ရာ အောင်မြင်မှုအလီလီ ရရှိတော်မူခဲ့သည်။
၁၁၂၁-ခု၊ ၀ါဆိုလဆုတ် (၁၀)ရက် ကြာသပတေးနေ့တွင် ယိုးဒယားသို့ ချီတက်တိုက်ခိုက်ရန် အလောင်းမင်းတရားသည် ကျောက်မြောင်းဆိပ်တော်မှ အောက်ပြည်သို့ စုန်တော်မူသည်။ ၀ါခေါင်လဆန်း(၁၁)ရက်နေ့၌ နေပြည်တော် ရွှေဘိုမြို့ပေါ်သို့ မိုးကြိုး (၁၃)ချက် ကျသည်။ မိုးကြိုးကျရာ ဌာနများကား……….ဆင်ချည်တိုင်.မြင်း.လွှစင်.ကျုံးနင်းကြမ်း.နဘဲပင်.တမာပင်.လက်ခုပ်ပင်.ပေါက်ပန်းဖြူပင်. ညောင်ပင်.ကျောင်း.မင်းကျော်သီရိအိမ်.တပယင်းမြို့တံခါးနှင့် မြ၀တီပြအိုးတို့ဖြစ်သည်။ အလောင်းမင်းတရား ကြားသိ၍ ပညာရှိများအား ဖတ်ကြားတင်လျှောက်စေရာ စာဆိုတော်ပညာရှိ စိန္တကျော်သူက မိုးကြိုးကျခြင်းမှာ ဣဋ္ဌမင်္ဂလာများဖြစ်ကြောင်း ရတု ၆-ပုဒ်ဖြင့် မင်းတရားကြီး သဘောတော် မျှစေရန် မမှန်မကန် လျှောက်တင် လိုက်လေသည်။
စိန္တကျော်သူ၏ လျှောက်တင်ချက်ကို အဟုတ်မှတ်၍ သဘောတော်ကျကာ (ပြုသင့်သောယတြာများ မပြုဘဲ)အောက်ပြည်သို့ ဆက်လက်စုံဆင်းပြီး ယိုးဒယားကို ချီတက်တိုက်ခိုက်ရာ မအောင်မမြင်ဖြစ်ပြီးလျှင် ၁၁၂၂-ခုနှစ် ကဆုန်လဆုတ် (၁၀)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မုတ္တမမြို့နယ် ကင်းရွာ၌ ရုတ်တရက်ဖျားနာ၍ နတ်ရွာစံတော်မူခဲ့ရလေသည်။
(ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် ပျက်စီးနေချိန်သည် နှစ်ပေါင်း ၁၈၀-ကျော်ကြာခဲ့သော်လည်း ဒုတိယမြန်မာ နိုင်ငံတော် ပျက်စီးချိန်ကမူ ၁-နှစ်သာကြာပြီး တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ခေတ်သို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိခဲ့လေသည်။)
ဟိုဆြာ ထောက်ပြသွားတာတော့ အဖေက မွန်နာမည် အမေက ကရင်နာမည်မို့
မွန်ကရင် ကပြားလား မဆိုနိုင်..
ဦးအောင်ဇေယျက အစပိုင်းမှာ မွန်စစ်သူကြီး ဒလပန်းနဲ့တင်မဟုတ် ပြိုင်ဘက်ဦးချစ်ညိုနဲ့ပါ ယှဉ်ရတာ။ ဦးချစ်ညိုရဲ့အမေ ဒေါ်ဇံကလားပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားက သမိုင်းဝင်ပဲဗျ။ အယုဒ္ဓယကိုဖျက်တာ ဗမာတွေချည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ နောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့ တရုတ်တပ်တွေက ဘုရားတွေခေါင်းချိုး မြေလှန်သွားတာ။ ကျုပ်တို့ရာဇဝင်မှာတော့သူရဲကောင်း၊ ယိုးဒယားရာဇဝင်မှာတော့ ကာလသားရောဂါနဲ့သေတယ်လို့ ရေးထားတာ… အဲသည်လောက်ကို ချစ်ကြတာလေ။
(ထမီကို ခါ၍) ဟယ် .. သားမောင် မှားပြီ။ ရှင်ဘုရင်လုပ်မည့်သူမှာ ညီဟူ၍ အမှတ်ထားရာ သလော။ ညီဆိုသည်မှာ ဟောဒီမိခင် ဝမ်းဗိုက်ရှိသမျှ ရနိုင်သည်။ (မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း)
ဦးအောင်ဇေယျ ဆို …
ညန်မာဖောင့် ရေးဒဲ့ ဦးအောင်ဇေယျ ဒေါ့ သက်ရှိထင်ရှား ရှိသဗျ …
နောက်တာပါ ဆရာမ ….
ဖတ်ရှု သွားပါတယ် ဆရာမ …
ကွန်မန့်တွေကိုလည်း စောင့်ဖတ်နေမှာပါ ဆရာမ …
သူ့ ဗလ တွေ လူတိုင်း မြင်ပြီး အားကျအောင် အဝတ်အစားကိုတောင်
ဗလ ပေါ်စေတာတွေပဲ ဝတ်တာ ဆိုလား
တော်တော် ဆိုတဲ့ လူကြီး
မင်းမင်း ကို နားရွက်ဖြတ်မည်။
အကယ်၍ သူတို့အပြေးကောင်းပြီး လွတ်သွားခဲ့သည်ရှိသော်-
မင်းမင်း ဘီလူးမကြီးနှင့် ညားပါစေ။
ယိုးဒယားသား သရဲမကြီးနှင့် ညားပါစေ။
အလင်းဆက် ခလေး၁၀ယောက်အမ တစ်ခုလပ်နှင့် ညားပါစေ။
ကြက်အူလှည့် ခလေး ၁၅ ယောက်အမေ နှစ်ခုလပ်နှင့် ညားပါစေ။ (သူကြီးအပြောအရ အတွေ့အကြုံရှိရင် ပိုကောင်းတယ်ဆိုလို့)
ဦးကျောက်စ်ကတော့ ချောချောလှလှဘွတ်ဘွတ်လေးနှင့်လွဲပြီး မဲမဲသဲသဲ မွတ်မွတ်ကြီးနှင့် ညားပါစေ။
(ဘွတ်ဘွတ်=Budhists ။ မွတ်မွတ်= Muslim )
ထုံးပဲအသုတ်ခံပါ့မယ် ဘွတ်ဘွတ်လေးနဲ့လွဲလို့ အသီးကွဲရင်…
လစ်လစ်တို့ရော တစ်တစ်တို့ရော ဘယ်သူမှသနားမှာမှဟုတ်…
ဖွဟဲ့… လွဲစေဖယ်စေ… အားဟိ
တား ဘာမှ မြင်ရတော့ဘူး ဂျ
သမိုင်း ကတော့ ဒလ မှာနေသူ တော့ မြစ်ခြားနေလို့ ဝေးတယ်။
သို့ပင်သို့ငြား ဒါဟာ နိုင်ငံရေးကို အသာထား။
ကိုယ့်ဘာသာကို တကယ်ဘဲ မြင့်မြတ်စေလိုတဲ့ စေတနာထားကြရင်ဖြင့် မေတ္တာ ကိုသာ ရှေ့တန်းထားဖို့သာဘဲ။
မေတ္တာ ကိုသာ ရှေ့တန်းထားလိုက်ကထဲ က ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ ဆိုတဲ့စိတ် ရှိတော့မှာမဟုတ် လို့ ထင်တာဘဲ မပြုံးရေ။
ဘုန်းကြီး တွေ ဟာလဲ ဘာသာရေး ပရို သမား တွေ မို့ professional ဆိုရင် သက်ဆိုင်တဲ့ Ethics ရှိကိုရှိရမှာပါ။ (ဟိုဘက် က အစ်မဒုံ စကား ကို ယူပါတယ်။)
အဓိက မေတ္တာ ပေါ့။
ဒါ ဘုန်းဘုန်း တို့ တာဝန်ဘဲ။
အခုမှာတော့ တစ်ချို့ ကိုယ်တော်များ Ethics ပျောက်နေတာ အမှန်ပါ။ (အများ ကို မဆိုလိုပါ)
ဘုန်းကြီးတွေ နဲ့ ဆွမ်းကပ် နေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တွေ ပုံကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
တကယ်တော့ အတော်များများကတော့ အေးအေးချမ်းချမ်း နေလိုမှာပါ။
အမုန်းတွေ ဖယ်ပြီး စည်းစည်းလုံးလုံးနေဖို့ မေတ္တာရှေ့ထား နဲနဲလေးကြိုးစားကြည့်ကြဖို့ကောင်းတာ။
မပြုံးစာလေးတွေ ဖတ်ရတာ ဗဟုသုတတိုးပါတယ်။
ကိုယ်မသိတာတွေ အများကြီး ဆိုတာ သိလာတယ်။
ဒီလို အချိန်လေးပေးပြီး မျှနေတာကို ကျေးဇူးပါနော်။
အရီးရေ့ – အလောင်းမင်းတရားလို ဘုရင်ကတောင် သံဃာကို အလိုလိုက်ခဲ့တယ်။ အဲဒါ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးထဲ ဆွဲသွင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုကိုသာ နိုင်ငံရေးနဲ့ အပ်စပ်အောင် ဆွဲစေ့လိုက်ပုံ ကို ပြောချင်တာပါ။ အခု ဖြစ်နေတဲ့ သဘောထားက – လစ်ဘရယ်တွေက သံဃာတွေ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းကင်းနေလို့ အသံကုန်ဟစ်နေကြတယ်။ မြန်မာပြည်လို တိုင်းပြည်မှာ ဒါမျိုးမရဘူး။ မျိုးချစ်ဝါဒီတွေ အားကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာ ဒါမျိုး မရဘူး။ ဒီလိုသာ လစ်ဘရယ်တွေ သံဃာကို တိုက်ခိုက်ရင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သေချာပေါက် ရှုံးပါလိမ့်မယ်။ NLD ရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးထဲ ဆွဲသွင်းတယ်လို့ သဘောမထားဘဲ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုကိုသာ နိုင်ငံရေးထဲ ဆွဲသွင်းတယ်လို့ အမြင်ပြောင်းကြည့်ကြဖို့ တိတိကျကျ ပြောချင်တာပါ။ သံဃာ့သဘောကို အလေးအနက်ထားပြပြီး သူတို့အလိုကို လိုက်ကြဖို့ ပြောချင်တာပါ။ ခေါင်းမာနေခြင်းအားဖြင့် လိုရာမရနိုင်သေး။ လှပစွာ အလျှော့ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်တာပါ။
She stoops to conquer ပါတဲ့။
အလောင်းမင်းတရားလို ယခင်ကမင်းတွေကို လူတွေ ခပ်ချဉ်ချဉ်ရှိကြလို့ သေချာရေးပြနေရတာနဲ့ စာအိုင် သွားတော့ အဲဒီမှာ မန့်တဲ့လူတွေ ပေါက်ကရမန့်ကုန်ကြလို့။
အလောင်းမင်းတရားဟာ တကယ့်ကိုတော်တဲ့ဘုရင်။ တခြားမြန်မာဘုရင်တွေလို လေကြီးမိုးကြီးဝုန်းဒိုင်း ဘုရင် လုံးဝမဟုတ်။ အဲဒီမဟုတ်ကြောင်းကို သေချာပြောပြချင်လို့ socio-political context ဆိုတဲ့ စာလုံးနဲ့ အသေအချာကို ရေးတာပါ။
အဲဒီဆောင်ပုဒ်က ဘယ်ဆရာတော်နဲ့ဘယ်ဆရာတော်တွေအဓိကပါဝင်တဲ့ ၀ိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းရဲ့ အဓိက ဆောာင်ပုဒ် ဆိုကလားပဲ..
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်ဘာသာ လူမျိုးအတွက် ကာကွယ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်
မိန်းမမိုလို့ယောက်ျားမိုလို့ဘုန်းကြီးမိုလို့မခွဲခြားသင့်ဘူး
ဒီသဘောတရားဟာ သိပ်ပြီး ခေတ်နောက်ကျသွားပြီ။ အဲဒါ မျိုးချစ်ဝါဒီလို့ ခေါ်တာ။
အစ်မပြောချင်တာက မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီလို မျိုးချစ်ဝါဒီတွေ အရမ်းများလို့ အင်အားကောင်းလို့ ခုနေမှာ တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ လစ်ဘရယ်တွေဟာ မျိုးချစ်တွေကို ထိပ်တိုက်တွေ့ရင် ကိုယ်လိုရာ မရောက်နိုင်သေးဘူး။ ဒါကြောင့် မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းဖို့ အကြံပေးချင်တာပါ။ ပို့စ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းက မြင့်တယ်။ အဲဒါကို ရေးတာ စာလေးသွားတော့ ခက်တယ်။
အချိန်ရရင် ဒါကိုပဲ နောက်တစ်ခေါက် စာမပေါ့အောင် ပြန်ရေးဦးမယ်။
ဒီအသိကို မတွန်းပေးရင် NLD ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးမှာစိုးလို့။
ဒီလိုသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောကြရင် ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲတာလား အရည်ချင်းကွဲတာလား
မင်းကဘယ်လောက်သိလဲ ငါကဘယ်လောက်သိတယ် ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောကြတယ်
အချို့ကြတော့သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုကို ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိ ခံစားပြီးပြောကြတယ်
ကောင်းတယ်လို့ခံစားရင် စားမြုံ့ပြန်တယ် မကောင်းဘူးလို့ ခံစားရင်
ဒေါသထွက်တယ် ဝမ်းနည်းတယ် အကျိုးကြောင်းမညီညွှတ်ရင်
ဘေးနားရှိတဲ့ ကောင်ကိုလက်ညိုးထိုးပြီး ထရိုက်မယ့်ပုံစံနဲ့တောင်ဖြစ်တယ်
အချို့ကြတော့ ဒီပိုစ့်ပါအကြောင်းလို သမိုင်းကြောင်းထဲက သင်္ခန်းစာတွေကို သုံးသပ်တယ်
ပြောရရင် သမိုင်းဆိုတာက ဘယ်သူမှလည်းထိုင်ကြည့်နေခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူး
လက်လှမ်းမှီရာစာပေတွေ အထောက်အထားတွေကို လေ့လာပြီး ပြောဆိုနေကြတာ
လူမျိုးရေးဝါဒတွေဝင်လာပြီး ဒေါသတွေထွက်ပြီး အမုန်းတရားတွေနဲ့ဖြစ်ကုန်ရော
ကျုပ်တောင်ငယ်ငယ်က ကပြားဖြစ်လို့ မျိုးမစစ်ဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ပျက်ဘူးတယ်
မင်းလိုဟိုမရောက်ဒီမရောက်ကောင်ကတော့ ဟုတ်တာပေါ့တဲ့ အေလိုးတွေ
ဒါ့ကြောင့် အခြေခံကြတဲ့ လူတန်းစားတွေမှာ လူမျိုးရေးဝါဒတွေ အယူသီးမှု့နည်းစေဘို့
ဗမာလူမျိုးတွေမှာလည်း အခြားလူမျိုးတွေကို နှိမ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်
ဒါကလည်း လူမျိုးတစ်မျိုးခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး ဆိုခဲ့သလို
ခေတ်ကြီးက သူ့ဖါသာတိုးတက်နေတာ ခေတ်အလိုက်ပြောင်းလာတဲ့ ဘာသာစကားတွေကိုပြော
ခေတ်ကြီးထဲ ဟိုးရှေးရှေးက ယဉ်ကျေးမှု့က ပြတိုက်ထဲနေ ဒီနေ့ယဉ်ကျေးမှု့ကလည်း
တစ်နေ့ပြတိုက်ထဲရောက်ပေါ့ ဒါက သဘာဝဘဲ
ပြောရင်းနဲ့ ဘယ်ရောက်ကုန်ပါလိမ့် ???
ကရင်-မွန်-ဗမာ ခြစ်ကြည်ရေး နင့်ညီမ ငါ့ကိုပေး… ခြစ်ယောက်ဖဂျီး ကိုပုသထေး
ဒီတစ်ခါတော့ တစ်တစ် ကနေ လစ်လစ် ဘက် ကို ကူးတော့မယ်။
ကိုယ့် စိတ်ထဲ ရှိတာ ကို အဝေး က ဟောင် ရရင်တော့ ….
ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အနှစ်သာရ ကို ပျက်နေစေမဲ့ အကြောင်းတင်မက စစ်မှန်တဲ့ ဘာသာရေး ကို ပျက်စီး စေတဲ့ အကြောင်း တွေ ကို ပါတီ နိုင်ဖို့ တစ်ခု ထဲ နဲ့ ရေလိုက်ငါးလိုက် မနေသင့်ပါဘူး။
အဲဒီလိုသာ လူတန်းစား တစ်ရပ်ကို ကြောက်ပြီး နေရမယ်ဆိုရင် ဒီ အတိုင်းဘဲ မပြောင်းဘဲ ဆက်သွားနေဦးမှာဘဲ။
လက်ရှိ ခေတ် ကာလ အပေါ်မှာ မှားနေတာ ကို မှားနေတာ လို့ မထောက်ပြရင် အဲဒါကို အဟုတ်မှတ် ပိုပြီး ဆိုးသွားပါမယ်။
အာဏာမရခင်တစ်မျိုး အာဏာရပြီး တစ်မျိုး ဆိုတာတွေ ကို စိတ်ပျက်လွန်းနေပြီ။
ဘယ်သူ/ ဘာ ဆိုတာ ဂရုမစိုက်ဘဲ တိုင်းပြည် ကိုဘဲ ကြည့်ပြီး ရှင်းရှင်းပြောရရင် တော့ အခုချိန်မှာ ဘယ်ပါတီ/- ညာပါတီ နိုင်ဖို့ ဘာညာ အသာထား။
လောလောဆယ်ပျက်နေတဲ့ ၊ ပရမ်းမတာဖြစ်နေတဲ့ ဥပဒေတွေ နေရာမှာ မှန်ကန်တဲ့၊ ဘက်လိုက်မှု မရှိတဲ့ ဥပဒေတွေ အရင်ရောက်လာဖို့ အရေးကြီးတာ။
၂၀၁၅ ဆိုတာ ရေရှည်ကို ကြည့်ရင် မဝေးပေမဲ့ ရေတို မှာတော့ ၂နှစ် တောင်လိုသေးတယ်။
ဒီ ၂နှစ် အတွင်း မှာ ဗြဲလရမ်း ဥပဒေ နဲ့ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေကြတာ ကို အသာ ကြည့်နေမယ် ဆိုရင် ၂၀၁၅ မရောက်ခင်မှာ ကို တိုင်းပြည်ပျက် သွားမှာ။
ဒီအချိန်မှာ ဘာကိုမှ လျှော့တွက်လို့ မရဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို တိုင်းပြည်မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုတာက သူ့ ကို မြှင့်ပေးချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။
သူက တိုင်းပြည်ကို မြင့်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သူ လို့ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်လို့ပါဘဲ။
သူ့လိုဘဲ စိတ်ဓာတ်ရှိသူ တစ်ခြားပါတီ မှာလဲ ပေါ်လာမယ်၊ အဲဒီ ပါတီက သူ တွေ က NLD ထက် ပိုကောင်းမယ် ဆိုရင်လဲ တိုင်းပြည်ကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်သူ ကို ရွေးမှာပါဘဲ။
လောလောဆယ်မှာတော့ အစိုးရဝန်ကြီး တွေ မှာ ချစား နေသူ အများစု ရှိနေဆဲ။
အဲဒီ သူတွေ ရဲ့ သမိုင်း နဲ့ တင် အဲဒီ အစိုးရ အဖွဲ့က နာမည် ပျက်နေတာ။
အခု ပြသနာ က ဘာသာရေး ကို ခုတုံး လုပ်ပြီး ဘုန်းကြီးတွေ ကို အသုံးချ နေတာ အသေအချာမြင် နေရတာဘဲ။
အဲဒီမှာ နှလုံးရည်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးတွေ မပါလောက်ပါဘူး။
သူတို့ လဲ ကြားညှပ်နေမှာ အမှန်ဘဲ။
ဒါကို သူတို့ ကိုင်တွယ်ပေးနိုင်မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဥပဒေ ကောင်းကောင်း ရှိလာခဲ့ရင် အစိုးရ၊ ပြည်သူ၊ ကျောင်းသား၊ ဘုန်းကြီး၊ စစ်သား အပါအဝင် အားလုံး တစ်ပြေးညီ ဘဲ ဖြစ်ရမယ်။
တော်ရုံ အာဏာတွေ၊ အခွင့်ထူးတွေ မသုံးရဲ ဘဲ နေရလောက်အောင် ဖြစ်သွားစေချင်တယ်။
အားထားလောက်တဲ့ တရားဥပဒေ စည်းမျဉ်း အောက်မှာ နေထိုင်သူ အားလုံး လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ နေရာ၊ ဒေသ မရွေး တန်းတူ ဖြစ်နေရမယ်၊ သူများ ကို မထိခိုက်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့် ရှိနေရမယ်။
မှန်ကန်တဲ့ တရားစီရင်ရေး ကြောင့် ဘယ်သူ့ ကို ဘယ်သူ ကမှ ကြောက်နေစရာ၊ ဖိနှိပ်နေစရာ၊ ဖား နေစရာ မလိုတော့ဘူး။
မတရားတာတွေ မှန်သမျှ ကို ဖော်ထုတ်နေမဲ့ မီဒီယာ ကောင်းကောင်း တွေ လဲ ပေါ်လာမှာဘဲ။
အလောင်းဘုရားတို့ လက်ထက် က သုံး တဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ် မှား နေရင်တောင်မှ မပြောဘဲ ရေလိုက်ငါးလိုက် လွှတ်ထားရတဲ့ နည်း ကို သုံး ဦး မယ် ဆိုရင်တော့ ဟိုးအရင်လိုဘဲ ပြန်ဖြစ်နေဦးမှာဘဲ။
ဒီနေ့ ခေတ် နိုင်ငံတွေ ဟာလဲ အချင်းချင်း ပေါင်းကူး နေတာမို့ ကိုယ့်နိုင်ငံကလဲ ရှေးကလို တံခါးပိတ်ဝါဒ မဟုတ်တော့တာကို အသေအချာ ထည့်စဉ်းစားသင့်တာ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည် တိုးတက်စေဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ယူ လိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိစေချင်တယ်။
တာဝန်ယူတယ် ဆိုတာ က အစိုးရက အစိုးရတာဝန်၊ ကျောင်းဆရာက ကျောင်းဆရာ တာဝန်၊ ဆရာဝန်က ဆရာဝန် တာဝန်၊ ကျောင်းသားက ကျောင်းသားတာဝန်၊ စစ်သားက စစ်သားတာဝန်၊ ဘုန်းကြီး က ဘုန်းကြီးတာဝန် ကိုယ့် ဆိုင်ရာ နေမှာဘဲ စေတနာ နဲ့ တာဝန်ကျေ အောင်သာ လုပ်ကြည့်။
မတိုးတက်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။
နင်တို့ မလုပ်လို့ ငါတို့ ဝင်လုပ် တာ ဆိုတာ ပိုဆိုး နေတတ်ပါတယ်။
လုပ်လိုက်တာ ဘဲ ရှိတယ် အပြောင်းအလဲ မရှိတဲ့ အဖြစ်တွေ အများကြီး ဆိုတာ ကို သင်ခန်းစာ ယူလိုက်ကြ ဖို့ မသင့်ဘူးလား။
အတိုချုပ် ရရင်တော့ မြန်မာပြည် ကို အလွန် ချစ်တဲ့သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘဲ ရပ်တည် ပြောပါတယ်။
တိုင်းပြည် ထဲ က သူတွေ သူ့တာဝန် သူ ကျေနေနိုင်ဖို့၊ မတရားမှု တွေ မရှိဖို့ လက်ရှိ အာဏာရ အစိုးရ မှာ တာဝန် အပြည့်ရှိပါတယ်။
အဲဒီ တိုင်းပြည်ကို ထိန်းဖို့ ထိပ်တန်းက သူတွေထဲမှာ ဘဲ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ် ကျေအောင် မလုပ်တတ်ဘဲ / လုပ်ဖို့ အစွမ်းမရှိဘဲ ကိုယ့်စီးပွါး အတွက်သာ နေရာယူထား သူတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
သူတို့ ရှိနေသ၍၊ သူတို့ကို မဖယ်နိုင်သ၍ ဘာကိုမှ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်း လို့ မရပါဘူး။
ဒီတော့ ၂၀၁၅ ကိစ္ခ ထက် လောလောဆယ်မှာ အစိုးရထဲ က မသန့်တဲ့ သူအားလုံး ကို အရင် ရှင်းသင့်ပါတယ်။
တိုင်းပြည် အပေါ် စိတ်စေတနာ အမှန် နဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေး လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အင်အား ကိုလဲ တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် နေရာမှာ ယူသုံးသင့်ပါတယ်။
NLD အနေနဲ့ လဲ တိုင်းပြည် ကို တကယ်ဘဲ ချစ်ရင် ပါတီတွင်းမှာ အမှန်အကန် တာဝန်ယူ လုပ်နိုင်သူတွေ ကို စိတ်ထားအမှန် နဲ့ စင်တင် ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါဆိုရင် မမှန်တာ ကို မြင်လဲ နေရာ အတွက် ဘယ် လူတန်းစား ကိုမှ ရေလိုက် ငါးလိုက် လုပ်ပြီး နေ နေ စရာ မလိုတော့ ပါဘူး။
တိုင်းပြည် ထဲ က ပြည်သူ တွေ ရဲ့ အား ကို မှန်ကန် တဲ့ တိုးတက်မှု အတွက်ကိုဘဲ သုံးဖို့ တတ်သိပညာရှင် လစ်ဘရယ် များကနေ စည်းရုံး ပေးရမှာပါ။
ငါတို့ နဲ့ မဆိုင် ဆိုပြီး ကိုယ် နေသာသလို နေနေလို့ ကတော့ အားလုံးညီညီညာညာ ပါလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မဟုတ်လို့ ကတော့ စီးပွါး ပျက်မှာ/ အာဏာလွတ်မှာ ကြောက် ပြီး ရမ်း နေတဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတွေကြားမှာ တိုင်းပြည် ပြန်ပြီး ရေတိမ်နစ် ဦးမှာပါဘဲ။
၂၀၁၅ အထိတောင် ကြာမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလေး ကို …….
ဒီကိစ္စမှာတော့ လစ်ဘရယ် အစွန်း ဘက် ကနေ ကြည့်ပြီး ထင်ရာ ရမ်းတုတ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ စိတ်မတူရင်တော့ အရူးစကား လို့ သာ တွေးလိုက်ကြပါတော့။
လောလောဆယ်မှာ အစိုးရထဲ က မသန့်တဲ့ သူအားလုံး ကို အရင် ရှင်းသင့်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ ကျန်ခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး .. ဟိုးအောက်ခြေ စာရေးဝန်ထမ်းကနေစပြီး ဟိုး အပေါ်ဆုံးဆက်တက်လို့ မရတဲ့ အထိ အကုန် ရှင်းရမှာ ဖြစ်နေတယ်။။
ပိုစ်နဲံ မဆိုင်ဘေး ရောက်သွားတာ တော့ ခွင့်လွှတ်ပါ ဆရာမရေ ..
Top 10 go first.
ရှင်းချင်တဲ့ စိတ် ဆန္ဒ ရှိမယ်ဆိုရှင်း
% ပြည့်မဟုတ်တောင် % တော်တော်
သမတ ကလုပ်မယ်ကြံတိုင်း အထမမြောက်ဘူး။
ဒါကအစိုးရ(အာဏာရ) အဖွဲ့က လုပ်ချင်စိတ်မရှိသေး
အမရေ ဦးအောင်ဇေယျ ရဲ့  တက်ကနစ်ကိုတော့ ဆက်သုံးဖို့ ဒီခေတ်မှာ သိပ်လွယ်တော့မယ်မထင်ပါ။
အခုလောလောဆယ်တော့ NDF က အဲ့လို့မျိုးလုပ်ချင်နေသလားမသိဘဲ။
အရင်က မြန်မာနဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာ အမျိုးသားရေးဘဲတင်ရင်ရပေမဲ့ အခု တိုင်းရင်းသားတွေမှာလည်း ဘာသာရေးက ကွဲပြားနေပြန်ပါရော။ တံခါးပိတ်ထားလို့လည်းမရတော့ မီဒီယာတွေ၊ အခြားနိုင်ငံတွေကလည်း ဖိအားပေးမှာဆိုတော့ န-လယ်-ဒီ အနေနဲ့ အမှန်ဘက်ဘဲ ဆက်လက်ရပ်တည်စေချင်ပါတယ်။
အဲသလို လက်ရုံးက မီးတောက်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ လူထုကိုစည်းရုံးတယ်ဆိုတာ ဗမာဘုရင်တွေ လက်ထက်မှာ တော်တော်တွေ့ရပါတယ်။
ကွမ်းဆော်မင်းကို သိကြားမင်းက မြင်းနဲ့လှံတံ(ထင်တယ်) ပေးသွားတယ် ဆိုတာမျိုး။
အနော်ရထာမင်းကို သိကြားမင်းက အရိန္ဒမာလှံဆက်တယ်ဆိုတာမျိုး
ဒါလေးတွေက psychology အရတော့ လူတွေကို ဆွဲဆောင်အားတော်တော်ကောင်းတာပဲ။
ဒေါ်စုကလည်း မလတ်ထောက်ပြသလို အမှန်တရားဖက်ကပဲ ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုး။
ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့တွက် လျှော့ပါ့မလားလို့ စိတ်ပူတယ်။
ဒေါ်စုက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း တကယ့်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်လေ့လာတယ်၊မှန်မှန်ကန်ကန်ကိုးကွယ်တယ်။
သရဏဂုံတည်တယ်။(ဘုရားတရားသံဃာ လေးစားတာ အခြားသူ ဖိနပ်မချွတ်တဲ့နေရာမှာတောင် သူရိုရိုသေသေ ဖိနပ်ချွတ် ကန်တော့တယ်)
မနာလိုဝန်တိုလည်းမရှိဘူး။(သူ့ကို ရက်စက်ခဲ့သူတွေကိုတောင် နားလည်ခွင့်လွှတ်လက်တွဲ ဆွဲခေါ်လုပ်ပေးနေစဲ)
ငါးပါးသီလလည်းမြဲတယ်။(သူ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ လိမ်မပြောဘူး)
သီလကိုစောင့်ထိန်းရာမှာ ဆောက်တည်ပြီးမှ စောင့်ထိန်းတာ၊
အသွေးထဲ အသားထဲကကို မမှန်တာကို ကျူးလွန်လိုစိတ်မရှိပဲ ရှောင်ကြဉ်တာ၊လို့ ၃မျိုးရှိပါတယ်။
အရိယာများမှာသာ နောက်ဆုံးအချက်နဲ့ ရှောင်ကြဉ်နိုင်တာပါ။
ဒေါ်စုမှာ အဲဒီအချက်တွေ ကိုက်ညီနေတယ်။
သူနှစ်ပေါင်းများစွာ နေ့စဉ်တရားအားထုတ်တယ်။အမြဲ သတိရှိတယ်။
ကဲ ဒေါ်စု သောတာပန် သကဒါဂါမ် အရိယာဖြစ်ချင်ဖြစ်နေနိုင်တယ်နော်။
(Psychology အရပြောကြည့်မယ်ဆိုပေမယ့် ကျမတော့ ယုံကြည်နေတယ်)
အဲသလိုဆိုရင် သူ့ကို မွတ်ဒေါင်းပါလို့ မတရားစွပ်စွဲရင် အရိယူပ၀ါဒ ထိုက်နေမယ်နော်။
ပြုံးတို့လိုချင်နေတာက သူတော်ကောင်းကြီး (goody goody) ဟုတ်ဖူးနော်။
ပြုံးတို့လိုချင်တာက ငရဲမကြောက်တဲ့ လူမိုက်လူဖြောင့် သူရဲကောင်း။
သံသရာက လွတ်မြောက်ရာရှာရမယ့်သူတွေက သံသရာလည်ကြောင်းတရားတွေမှာ အားပါလွန်းနေတော့
လူတွေကလည်း ကောင်းတာမလိုချင် မိုက်ရဲတာပဲလိုချင်ကြတော့တယ်။
အန်တီ တစ်ဦးတည်း အမြင်ကတော့
လူတော်လူမိုက်/လူညံ့လူကောင်း/လူမိုက်လူဖြောင့် /လူတော် ကောက်ကျစ် ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှ ကိုယ့်ကို အုပ်ချုပ်မယ့် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
ငရဲကြောက်လို့ မမိုက်ရဲတာ မဟုတ်ပဲ
မှန်ရာကောင်းရာကိုသာ အသွေးထဲအသားထဲကကို လုပ်ချင်တော့တဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိတဲ့သူကိုပဲ လေးစားချင်လို့ပါ။
(ဒီစာလေးကို ရေးရတာကလည်း သီတဂူဆရာတော်ကြီး ငယ်စဉ်ကရေးခဲ့တဲ့ ပါယာသိသုတ္တန်-တမလွန်ကိုမယုံတဲ့ သုတေသနသမား ပါယာသိမြို့စားနဲ့ တရားဟောကောင်းတဲ့ အရှင် ကုမာရကဿပ တို့ရဲ့ စကားစစ်ထိုးပွဲ အကြောင်း စာအုပ်မှာ အခုခေတ် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများ သောတာပန်လောက်ဖြစ်ပြီးမှ အုပ်ချုပ်ရင် ကောင်းမှာပဲ ဆိုတဲ့ စကားလေးကို မှီးပြီး ပြောပါတယ်၊ဒီစာအုပ်က ငယ်ငယ်က ဖတ်ရပြီး အခုရှာဝယ်လို့မရတော့တဲ့ အတွက် ဘယ်စာမျက်နှာ လို့တော့ မညွှန်းပေးနိုင်တော့ပါဘူး။)
ဒီထက်​ပိုပြီး ရှုပ်​​ထွေးလာနိုင်​​သေးတယ်​လို့​တော့ ထင်​မိတာပဲ
သမ္မတလင်ကွန်းက.. အမဲတွေကို ကျွန်အဖြစ်ကလွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရင်.. ပြည်တွင်းစစ်ထဖြစ်မှာပဲလို့.. သိတာပဲ..
တိုင်းပြည်အနာဂတ်နဲ့.. လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက် လုပ်ခဲ့ရတာပါပဲ..။
အနော်ရထာက ဘုန်းကြီး(အရည်ကြီး) တွေ လူဝတ်လဲစေပြီး.. စစ်သားလုပ်စေခဲ့လို့.. အင်မတန်ကြီးတဲ့..စစ်တပ်ကြီးထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်..။
သမိုင်းအရ.. အလောင်းဘုရားက. .မွန်ဘုန်းကြီးထောင်ချီပြီးတော့ကို ဆင်နဲ့နင်းသတ်စေခဲ့တယ်.. တဲ့…။
ဟုတ်တယ်လေ သူကြီးရေ။ အလောင်းမင်းတရားက မွန်ရဟန်းတွေ ထောင်ချီပြီးတော့ကို ဆင်နဲ့နင်းသတ်ခဲ့တာ။ ရဟန်းတွေကို သူလိုရင်လိုသလို သုံးသွားတာပဲ။
ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ၉၆၉ လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ လူ ၁၀ ယောက်မှာ ၈ယောက်လောက်က မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ထောက်ခံတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘုန်းဘုန်းတွေစကားကြောင့်ပါပဲ။ NLD ကို နည်းနည်းလေးမူပြောင်းစေချင်တာပါ။ ခုမှ မျက်စိမပွင့်တပွင့်ဖြစ်လာတဲ့ လူမျိုး၊ ရိုးသားစွာ ခေါင်းမာတဲ့ မျိုးချစ်ဝါဒီတွေ၊ ဒီလူတွေကို ဘယ်လိုလိုက်လျောမလဲ ဆိုတာ ထောင့်တစ်ထောင့်ကနေ တွေးမိတာလေး ပြောတာပါ။
ဒီအတိုင်း ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် NLD တွေ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ဖို့ အကြိတ်အနယ်လုပ်ရတော့မယ်။ မယုံရင် စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပြုံးရဲ့ အားသာချက်ကတော့ မြန်မာပြည်နယ်မြို့လေးမှာနေနေပြီး နယ်ခံတွေ နဲ့ စကားပြောခွင့်ရှိနေတယ်။
အနှီကိစ္စက … ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း
ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက် သလိုလိုဘဲ
လက်သင့်ခံသင့် မခံသင့် ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်တကိုယ်ရည် အဆုံးအဖြတ်နဲ့ မတည်နိူင်